Tag: sirdoonka xiriirka | Martech Zone
Tag: sirdoonka xiriirka
Iskucelceliska xallinta xiriirka macaamiisha (CRM) xalku waa barxad quruxsan oo joogto ah… keydka macluumaadka iskuxirka, howlahooda, iyo; laga yaabee, qaar ka mid noqosho nidaamyo kale oo bixiya aragti dheeri ah ama fursado suuqgeyn ah. Isla mar ahaantaana, xiriir kasta oo ku jira keydka macluumaadkaaga wuxuu leeyahay xiriiro xoog leh, saameyn ku leh macaamiisha kale iyo kuwa go'aamada ganacsiga gaara. Kordhinta shabakadan lama furin, in kastoo. Waa maxay Sirdoonka Xiriirka? Tiknoolajiyada sirdoonka xiriirka waxay falanqeeyaan xogta xiriirka ee kooxdaada waxayna si toos ah u abuuraan garaafka xiriirka ee looga baahan yahay